トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Endri-javatra - jereo amin'ny lalana mahazo any anelanelany toerana Horukon fotoana
Ao Horukon fisamborana, dia efa mba ho afaka hametraka ny baolina avy amin'ny Horukon. Anisan'izany, fametrahana avo, toerana kafa, dia ny iva-napetraka sy telo karazana ireo ankehitriny. Ao, eo afovoany napetraka, dia te inona no handeha hijery izay hitranga. Kafa napetraka ny
Horukon no tena sarotra ny mahita ny alalan 'ao amin'ny 3 karazana toe-javatra.
Araka ny antony, zavatra toy izany ianao, satria hetsika mitovy amin'ny avo napetraka tamin'izany fotoana izany dia afaka ho hita. Ohatra, ao amin'ny avo-napetraka, nefa izany fa misy ny fahatsapana fa ny baolina dia ninonoanao ho voalohany, dia toy izany ny zavatra toy izany koa eo afovoany, rehefa mitranga toerana.
koa, sy trangan-javatra fa lasa sarotra ny hampihenana ny baolina ny ambony lovia, ihany koa ny ihany koa ny hitranga eo afovoany hametraka tranga maz?na eny an-dalana amin'ny alalan'ny. Ny zava-misy izany hoe ny maha samy hafa ny toerana avo sy ny toerana kafa, no tonga any amin'ny zava-misy fa tsy lehibe loatra.
Na izany aza, tiantsika misy ihany koa ny toerana hafa eo amin'ny toerana avo, ary toerana-kafa.
izany, Toa ny zava-misy fa ny isan'ny givin ny jackpot dia tsy mitovy. Ho an'ny avo toerana, ao anatin'ny vondrona, izay voafidy tao amin'ny vondrona fanapahan-kevitra, fa efa lehibe hira mitranga iray taorian'ny iray hafa, eo amin'ny raharaha-kafa toerana, koa amin'ny fandresena vondrona, hatramin'ny efatra ao anatin'ny dimy vondrona, tokony ho iray ihany ny zavatra mety hitranga ianareo fa ny jackpot tsy mikatona.
in kevitra ity, eo anivon 'ireo izay manamafy ny Horukon ny fisamborana, satria teo koa ireo izay hevitra tsy mitovy, tsy fantatro mazava tsara izany. Koa satria ny zava-misy fa ny olona sasany manana izany karazana hevitra, miezaka ny boky toy ny iray amin'ireo hevitra.
trangan-javatra ireo no ho endri-javatra mety hitranga eo afovoany toerana.
zavatra toy izany dia, ny mikapoka mikendry teo amin'ny latabatra izay mitranga tsy tapaka, na dia eo afovoany voalaza hoe: hametraka ny azo atao mba hanao ny hira lehibe mialoha.
Na dia izany aza, fa ny nahasamborana mampiasa ny Horukon, tsy mitovy hevitra eo ireo izay manamafy izany Marina koa izany misy matetika ihany koa ny tranga izany. Koa satria ihany koa kely voasoratra momba ny afovoany hametraka rehefa in
harato, sns, ankapobeny ao amin'ny momba ny ambony toerana sy ny tranga toy izany koa, dia ho lasa ho any amin'ny zava-misy fa hevitra tsara ny hijery ny isa na ny tahaka ny jackpot Heveriko.